Azo atao ve ny manakarama mpanolo-tsaina momba ny varotra Amazon?
Matetika ireo mpivarotra an-tserasera izay manana traikefa amin'ny raharaham-barotra e-commerce dia miteraka olana rehefa manomboka vokatra amin'ny Amazon. Araka ny fantatrao, ny teoria dia tsy mitovy amin'ny fampiharana. Izany no mahatonga azy io matetika tsy ampy handinihana ny teoria avy amin'ny mpitari-dalana Amazoniana sy ny torolàlana. Mila olon-kafa izay mahafantatra ny fomba fiasan'ny Amazon rafitra miaraka amin'ny traikefa an-tanana voalohany. Izany no antony maha-ara-drariny ny mikaroka toro-hevitra mahaleotena.
Ny antony voalohany mahatonga ny Amazon mpivarotra mitady ny mpanolotsaina mivarotra dia anisany:
ny mpivarotra dia tsy te hamela ny volany eo ambony latabatra noho ny tsy fahampian'ny isan-jaton'ny fifamoivoizana mankany aminy lisitra;
Tsy manana fanatrehana eo amin'ny Amazon ny mpivarotra ary maniry ny hahatonga ny vokatra ho hita amin'ny mpanjifa mety;
raha efa misy orinasa sy mpivarotra hafa efa voavoly amin'ny vokatra Amazon;
rehefa fantatry ny mpivarotra fa tsy manao izany izy ireo ary mety ho izany - servidores proxy en chile.
Azo alamina avokoa ireo olana rehetra ireo. Na izany aza, mila mandany fotoana vitsivitsy ianao amin'ny fikarohana sy fanadihadiana ny fandaharana Amazon amin'izao fotoana izao. Avy eo ianao dia mila manangana fampielezan-tseraseran'ny fampielezan-kevitra, amin'ny fampiharana fitaovana maro sy fanatsarana. Mitaky fahalalana sy traikefa manokana izy io.
Misy fiantraikany sy fiantraikan'ny fitantanana ny fahitalavitra Amazon anao. Na izany aza, izy rehetra dia samy midina amin'ny foto-kevitra roa momba ny raharaham-barotra - fotoana sy vola. Mila mandany fotoana bebe kokoa ianao hananganana fanentanana ara-barotra amin'ny anao manokana. Avy eo dia mieritreritra ianao hoe ohatrinona ny vola azonao atao amin'ny lisitra tsara indrindra azonao Amazon. Na izany aza, mbola mila manombatombana ny habetsaky ny vola azonao ho very noho ny fotoana nametrahanao ny tetik'asa fanatsarana rehetra amin'ny orinasanao Amazon. Tsy misy ny teti-bola eo anelanelan'ny fotoana sy ny vola raha ny momba ny fampandrosoana ny orinasa. Izany no mahatonga ny ankamaroan'ny orinasa hanapa-kevitra hiantehitra amin'ny mpanolo-tsaina momba ny varotra Amazon mba hamonjena ny fotoanany sy ny volany.
Hodinihinay ato amin'ity lahatsoratra ity ny antony lehibe mahatonga anay ho tsara kokoa ny miara-miasa amin'ny mpanolo-tsaina momba ny varotra Amazon noho ny fitantanana ny orinasa amin'ny tenanao manokana.
Ny antony voalohany hanamboarana consultant sales sales Amazon
Amin'ny fiaraha-miasa amin'ny manam-pahaizana Amazon mpivarotra, afaka mitsambikina ny fari-pahaizana fianarana
Maro ireo dingana, templates, Ireo ekipa mpanoro hevitra matihanina dia manampy ny mpanjifa manomboka sy manatsara ny vokatra ao Amazon. Ny ankamaroan 'ireo fepetra ireo dia tsy mbola nodinihina mialoha. Noho izany, tsy ho afaka hahita vaovao mifandraika amin'izany ianao ao amin'ny Internet. Maro amin'ireo fomba ireo no atao indray mandeha monja mandritra ny dingam-panavaozana, na amin'ny tranga iray rehefa misy zavatra tsy mandeha. Tsy mila miditra amin'ny antsipiriany momba ny fomba fiasa tsirairay ianao raha toa ka vita ny zavatra rehetra ho anao. Ny mpanolo-tsaina ny varotra dia mitantana ny sakafo atoandro rehetra ary manahiran-tsaina ny olana misy rehetra misy, toy ny fanombohana, ny mpanjifa, ny fahatanterahany, sy ny sisa. Hanararaotra ireo fahafaha-manao rehetra izy ireo ary hamaha ny olana ao amin'ny tsoka.
Professional consultants momba ny varotra Amazon dia hanome anao ny fahazoana fomba tsara indrindra sy fitaovana mahomby
Mpivarotra izay mitantana ny kaonty Amazon, amin'ny ankapobeny dia tsy manam-potoana amin'ny fikarohana sy ny fivoaran'ny orinasa satria izy ireo mandray anjara amin'ireo hetsika isan'andro atao isan'andro, toy ny entana entina handraisana, ny tolotra fanohanana ny mpanjifa ary ny fitantanana ny toetra hafa. Noho izany, mety ho sarotra ny manohy ny famolavolana ny tsena rehetra sy ny fivoaran'ny indostria. Noho izany, mila olona iray izay manara-maso ny tsena Amazonia foana ianao ary mahafantatra ny karazana fikarohana sy PPC algorithm rehetra, fahaiza-manao amin'ny sehatra ary ny sisa. Ny sales consultant Amazon dia hanampy anao hanitsy ny raharaham-barotra amin'ny fanavaozana ny fivarotana ecommerce rehetra ary hiaro ny orinasa amin'ny fahaverezana sy ny fikajiana. Ankoatra izany, ny manam-pahaizana Amazon dia afaka mamantatra hoe ahoana no ahafahan'ireo fiovana ireo ny orinasanao.
Ny manam-pahaizana momba ny varotra Amazon dia hanampy anao hanatontosa ny kaontin'ny kaonty any Amazon ary manome fotoana anao hifantohana amin'ny lohahevitra ara-barotra sy ny famokarana
Ny ankamaroan'ny orinasa, indrindra fa ireo goavam-be, ampiasao Amazonia ho toy ny tsena fanampiny amin'ny fivarotana ny entany. Noho izany, izy ireo dia mifantoka bebe kokoa amin'ny olana momba ny famokarana sy ny tsena voalohany toy ny loharanon-tranonkala iray na fivarotana amin'ny aterineto. Sarotra ny mitantana sy mitombo isan-karazany ny fivarotana, ny fizarana ary ny fivarotana varotra. Na izany aza, tokony ho nahatsapa ianao fa ny fitadiavam-bola amin'ny Amazon dia mitaky fotoana sy investments, indraindray aza mihoatra noho ny tokony hampiasanao rehefa mitantana ny orinasa tsy miankina ianao.
Ny orinasa mahomby dia tsy mitsahatra miala amin'ny làlan'ny mpivarotra. Misy foana ny endri-javatra vaovao hanandramana, fanavaozana vaovao hafa hampiharina, ny dikan-dikan-teny vaovao halefa, ary ny fironana hijerena. Ny raharaham-barotra marefo dia tsy afaka mijanona mandritra ny fotoana fohy satria mety hitarika ho very ny vola. Izy ireo dia efa eo am-pametrahana ny fomba vaovao handrindrana ny vola ary hampitombo ny tombom-barotra. Ny fampandrosoana raharaham-barotra no fomba mahomby indrindra handosirana ny vola ary hiantsoroka mpanjifa maro kokoa. Noho izany, ireo mpivarotra malaindaina dia tokony hanome lanja ny fotoanany sy ny fananany.
Mila manokana fotoana bebe kokoa amin'ny raharaham-barotra stratejika ianao, ary ny fampivoarana ny vokatra fa tsy amin'ny famokarana vokatra mamely sy mamaky ireo tetikady Amazon indrindra. Amin'ny fampiasana ny tolotra fanatanjahantena momba ny varotra Amazon, dia afaka mifantoka amin'ny zavatra fototra sy manan-danja ianao, ary ny lafiny hafa kosa dia tarihan'ny matihanina.
Ny fiheverana farany
Raha ampitahaina, izay rehetra noresahiko tetsy ambony, dia azoko lazaina fa ara-dalàna sy mandaitra tokoa ny hanakarana ny varotra Amazon mpanolotsaina, indrindra raha manangona ny vokatrao eo amin'ny tsenambarotra maromaro ianao. Na hanatsara ny lisitry ny Amazon-nao ianao na hampifanarahanao amin'ny fanentanana dokam-barotra isam-barotra, dia hahazo bebe kokoa ianao amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo matihanina za-draharaha, fa tsy ny fanaovana izany. Ankoatra izany, afaka mamela fotoana hivoahana amin'ny fivoaran'ny orinasa sy ny fanatsarana ianao.